Oromoo quba qabaadhu!Milishoota Gandaa waraanatti erguuf murta’e !! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromoo quba qabaadhu!Milishoota Gandaa waraanatti erguuf murta’e !!
“Amma Oromiyaa keessatti Maafayaa group Abiy’n ajajamu Police humna Addaa oromiyaati.Hunda isaanii miti.Warra Addatti filamee humna addaa oromiyaa keessatti sadarkaa ajajaa irra warra jiran fi isaan keessa jibba oromoo kan qaban fi oromoo utoo hin ta’iin afaan oromoo warra dubbatan ta’uu Qabatamaan Qeerroon irra qaqqabee hordofaa jira.Daataan isaaniis galma’ee jira.Ummanni oromoo kan hundi beekuu qabu
Amma oromiyaa keessatti jimlaan ajjeesaa fi hidhaa kan jiran ,Mana murtiif kan hin ajajamne police humna addaa Warra ajajaa Abiy duubaa ajajaa jiruudha.Uummanni oromoo bakka jirtan Ganda irra jalqabee ,Aanaa,Magaalaa ,Godina fi Oromiyaa irratti Eenyu ajajaa jira/ture ??
Yeroo isaan ajajan Badii maaltu oromoo irratti raawwate ?Guyyaa guyyaan Maqaa isaanii saaxilaa .Tooftaan Amma Abiy oromiyaa ittiin shororkeessaa jiru qawwee humna addaa oromiyaati.Jala bu’aa bakka hundatti saaxilaa.
Milishoota Gandaa waraanatti erguuf murta’e !!
Milshaa Gandaa Oromiyaa keessa jiru marsaa marsaan leenjisanii gara majkalaakayaatti dabaluuf murta’ee jira.Ji’a Fulbaanaa kana irraa calqabuuf raawwiin calqabeera.
Bilxiginnaa ppn Milishaa Ganda tokko irraa milishaa shan akka guutuu Oromiyaatti leenjisanii waraanatti dabaluuf jiru. Kaabineen ganda keessa deemtee kadhachuu calqabdee jirti.Qeerroo fi uummanni oromoo sjira diinaa kana dursaa hubadhaa.
Maatii fi firri keessan kamuu milshaan tokkoyyuu akka leenjii hin deemne godhaa.
Eenyuun loluuf itti hirmaata ?
Shira diinaa Oromoo Oromoon lolchisiisuuf karoorfame harkatti fashaleessa.